एनआरएनएका अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसी समुहमा को को उम्मेदवार हुन्? (नामवली सहित) - पिटि अनलाईन न्यूज
एनआरएनएका अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसी समुहमा को को उम्मेदवार हुन्? (नामवली सहित)
१२ आश्विन, २०७८ २०:३४
गैर आबासीय नेपाली संघका अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीले आफ्नो समूहको टुंगो लगाएका छन्। रसिया निवासी ब्यबसायी समेत रहेका बर्तमान उपाध्यक्ष डा. केसी आफ्नो समूहसहित चुनावी मैदानमा उत्रिने भएका हुन्।